Safiirka Somaliland U Fadhiya Faransiiska Oo Ka Qayb Galay Shirka Ka Faa’iidaysiga Khayraadka Baddaha | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Safiirka Somaliland U Fadhiya Faransiiska Oo Ka Qayb Galay Shirka Ka Faa’iidaysiga Khayraadka Baddaha
Paris (SDWO.com): Safiirka Somaliland u fadhiya magaaladda Paris ee dalka Faransiiska Cali Ismaaciil Xasan, ayaa ka qayb galay shir ku saabsan ka faa’iidaysiga khayraadka Baddaha, kaasoo lagu qabtay magaaladda Brest, oo xeebta ku taalla.
Shirkan oo ah mid sanadle ah ayaa noqonaya kii 13aad ee la qabto, waxaana ka soo qayb galay shirkado maalgashi, xirfadleyaal iyo shirkadaha ka ganacsiga khayraadka Baddaha ee Faransiiska iyo qaar kaloo caalami ah.
Waa markii saddexaad oo shir noocan ah lagu soo marti qaado Somaliland, iyadoo laba jeer ooh ore uu shirkaasi Somaliland uga qayb galay danjire Cali Ismaaciil Xasan. Sidaasina waxaa lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland.
Shirkaasi oo socday saddex maalmood ayaa danjiraha Somaliland ee Paris oo khudbad ka jeediyay ayaa halkaasi ka sheegay in fursado maalgashi ay ka banaan yihiin Baddaha Somaliland ayna amaan yihiin, isla markaana ka bed qabaan budhcad Baddeeda.
“Somaliland waa dal leh xeeb dhererkeedu gaadhayo 850KM, oo nabad ah, fursado maalgashi oo kala duwan ayaana ka jira.
cid kastoo iskaashi dhaqaale iyo maalgashi u dan ah shacabka Somaliland haysa waan soo dhoweynaynaa” ayuu yidhi Cali Ismaaciil.
Geesta kale wasiirka degaanka iyo nabadelyadda dawladda Faransiiska Mr. François de Rugy, shirka furay ayaa sharaxaad ka bixiyay muhiimadda ay leedahay ka faa’iidaysiga khayraadka Baddaha gudaha iyo kuwa caalamka ee ay ku haboon yihiin fursado maalgashi.
Mr. Rugy, ayaa sheegay in dalkiisu soo dhawaynayso diyaar na u tahay ka faa’iidaysiga khayraadka Baddaha dihin, isla markaana wadamadoodu diyaar u yihiin isdhaafsiga dannaha dawladaha kale.